ကြွက်ကတိုးသည် မြောက်အမေရိကတိုက်၌ အများအားဖြင့် တွေ့ရသော ကတိုးနံ့ထွက်သည့် ကြွက်တမျိုးဖြစ်သည်။ ချောင်းကမ်းပါတို့တွင် တွင်းတူး၍ နေတတ်သည်။ ရေကူးအလွန် ကျင်လည်သည်။
ဆောင်းဦးပေါက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဆောင်းရာသီ ခိုလှုံရန်အတွက် အိမ်ကို ပြုပြင်ဆောက်လုပ်လေ့ရှိသည်။ လူတို့သည် ကြွက်ကတိုးကို သူတို့၏ အိမ်မှ သားမွှေးရရန်အတွက် အမြောက်အများ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မူ မရှိသလောက် ရှားပါးသွားသော ရှားပါးသတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
↑ Linzey, A.V. (2008). Ondatra zibethicus. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 10 Jule 2009. Database entry includesabrief justification of why this species is of least concern.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြွက်ကတိုး&oldid=523324" မှ ရယူရန်
၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။